Hadiyado & Farshaxanno News iyo Sheekooyin by Alietc.com - Alietc.com
Alaabada Qurxinta Arooska
Doorashada alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican ayaa fure u ah guushaada markay tahay qurxinta arooska. Helitaanka alaab-qeybiye saxda ah oo hadiyado ku bixiya qiimo aad u jaban oo raqiis ah waa waxa aad rabto inaad sameyso. Qurxinta xafladaha aroosku waxay noqon kartaa shaqo waqti badan qaadata oo culeys badan leh laakiin xulashada alaab-qeybiyaha saxda ah ayaa run ahaantii kaa caawin kara arooskaaga inuu helo […]Read More
Sida loo Xulo Qalabka Saxda ah Marka Aad iibsaneyso Farshaxanka Farshaxanka
Weligaa miyaad ku wareersan tahay halka laga iibsado farshaxannadaada? Ka hor intaan dadku u aadin inay ka soo iibsadaan waxyaabahaan ilaha internetka, waxay u baahan yihiin inay kalsooni muujiyaan oo ay diyaar garoobaan. Markii dadku go'aan ka gaaraan inay soo iibsadaan farshaxankan, badanaa ma oga inay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan xulashada alaabta. Dhamaan maahan […]Read More
Bixiyeyaasha Dheriga iyo Dhaldhalka
Qof kasta oo ka socda xirfadleyda warshadaha cuntada illaa macallimiinta dugsiga illaa kuwa wax dhisa waxay ka faa'iideysan karaan adeegsiga alaab-qeybiyaha dhoobada iyo dhaldhalaalka. Dheryaha si toos ah ayaa loo iibsan karaa, laakiin haddii qandaraaslaha uu raadinayo alaab qiimo jaban, waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay heshiis la galaan shirkad gacansaar la leh oo bixisa qiimo hoose ama alaabooyin […]Read More